Vaovao - Maninona izahay no mampiasa fitaovana firavaka aliminioma ary inona ny firaka ampiasaina amin'ny peratra fisintomana ilay kapoaka?
Maninona izahay no mampiasa fitaovana firavaka aliminioma ary inona ny firaka ampiasaina amin'ny peratra fisintomana ilay kapoaka?
Ny zava-pisotro am-bifotsy mahazatra dia misy ny Coca-Cola, Sprite, ary ny karazan-labiera rehetra, sns. Inona avy ireo tombony azo amin'ny fampiasana fitaovana aliminioma? Avelao hanazava azy vetivety ny New Aluminium Tech Co Ltd.
Ny tombony azo avy amin'ny kapoaka alimo
Hisy karazana horonantsary oksida amin'ny fisehoan'ny aliminioma, AL2O3 fotsiny, izay mahatonga ny aliminioma tsy hampidira rano amin'ny hafanana ambony. Ny fisehoan'ny kapoaka alimo dia misy ihany koa ity horonantsary oksida ity, na dia misy ranoka aza (afaka mamorona ny ranoka vahaolana amin'ny aliminiôma sy Oksizenina haingam-pandeha ny fihenan'ny ôksidasiôna), tsy ho harafesina toy ny vy ihany koa.
Ny peratra Pull an'ny Cans dia vita amin'ny alimina 5182
Mandritra izany fotoana izany dia kely kokoa ny hakitroky ny firaka aliminioma, miaraka amin'ny habetsaky ny vatan'ny aluminium noho ny vy ho kely kokoa, ny tanana afaka, mazava ho azy, no mora entina kokoa, tsara kokoa isika; maka mora kokoa ny firaka aliminioma. fanodinana sy fiarovana ny tontolo iainana.
Ny aliminioma dia plastika avo lenta, miaraka amin'ny metaly hafa mora avadika ho alloys hafa, hamafin'ny aliminioma, plastika, ary na dia ny fahatsiarovana aza dia misy fihatsarana lehibe tokoa, ny tsiranoka aliminioma dia manana fahatsiarovana tsara, ny fihazonana eo am-pelatanany amin'ny ankapobeny dia tsy fiovana, ny ankamaroan'ny fonosana alimina famonoana sakafo firaka, noho ny fikirakirana mora, mora ihany koa, plastika avo lenta, ny Aluminium dia azo lazaina ho fitaovana be mpampiasa tokoa
Zhejiang New Aluminium Technology Co Ltd dia mandray ny haitao mandroso ary mamokatra kalitaon'ny alimina avo lenta 3004, 5052, 5083 ho an'ny kapoaka afaka sy misintona kapoaka, ny hatevin'ny 0,1 mm ka hatramin'ny 0,35 mm, ny sakany farany 1850 mm . Amin'ny maha-kalitao sy vidin'ny fifaninanana tonga lafatra azy, ny coil aluminium anay dia afaka manondrana any Polonina, Alemana, Italia, France, Torkia ary mahazo laza tsara
Tongasoa eto hitsidika anay ary raha misy fisalasalana, aza misalasala mifandray aminay na oviana na oviana
Fotoana fandefasana: Jan-09-2021